Neck Gaiter Vatengesi uye Fekitori - China Neck Gaiter Vagadziri
Ruvara rwakasimba Tubular Seamless Bandana
Chinyorwa: 100% polyester
Yakasarudzika Logo Polyester Bandana
Vana Vakomana Vasikana Scarf Mashiripiti Bhandana Neck Gaiter Tube Cartoon Dhinda
Chinyorwa: 100% donje
Dhijitari Dhinda Microfiber Dehenya Midhudhudhu Bhandana
Bandanas Chinyorwa: 100% donje
Varume Vakadzi Bandana Zhizha Kumeso Chivharo Chakarembera Nzeve Tube Scarf Ice Silk Neck Gaiter Inofema Bandana
Ichichachanika uye ichishandiswazve, ichi chakagadzirwa nemaoko kumeso kana chubhu tsvuku inozivikanwa seye mutsipa gaita / bhandi bhandi. Izvi zvese zvinogadzirwa muChina uye zvinogona kupfekwa nenzira dzakasiyana siyana. Iupfeke kunge mask ski, mutsipa gaita, balaclava, kuvhara kumeso, bhanhire, kudzivirira kwezuva, pasi pengowani / ngowani uye nezvimwe! Iyo jira inogadzirwa kubva ku95% polyester ine 5% spandex. Isu tinopa-dhayi uye tinogadzira iwo masaga isu pachedu muGoridhe, CO uye neGreater Denver Area. Chinhu chega chega chakaongororwa katatu kuchengetedza ...
Polyester nzeve chiuno mutsipa gaita
Dhizaini Bandana nenzeve chiuno mutsipa gaita Chiso chekuvhara
nyowani tsika kuficha chubhu bandana
Bandana nenzeve chiuno mutsipa gaita Chiso chekuvhara balaclava yevarume
Yakasarudzika Logo donje Bandana
Bandana nenzeve chiuno mutsipa gaita Chiso chekuvhara